Famatsiam-bola amin’ ny fifidianana : Handray andraikitra ny SAMIFIN, raha misy ny tsy ara-dalàna -
AccueilSongandinaFamatsiam-bola amin’ ny fifidianana : Handray andraikitra ny SAMIFIN, raha misy ny tsy ara-dalàna
Famatsiam-bola amin’ ny fifidianana : Handray andraikitra ny SAMIFIN, raha misy ny tsy ara-dalàna
Na malalaka aza ny famatsiana ara-bola mandritra ny fifidianana taorian’ ny fanafoanana ny andininy faha-74 sy 75 mifehy ny fifidianana amin’ ny ankapobeny sy ny fitsapan-kevi-bahoaka mandrara ny fampiasana vola avy any ivelany mandritra ny fifidianana, dia nilaza ny tsy hipetra- potsiny amin’ izao ny SAMIFIN hoy ny taleny Lamina Boto Tsaradia omaly raha nanontanian’ny mpanao gazety mikasika ny famatsiam-bolan’ireo kandida. Nambaran’ ny talen’ ny SAMIFIN moa fa tsy anjaran’izy ireo velively ny manara-maso ireo vola ampiasain’ ny kandida, saingy kosa raha tsapa fa misy ny fihoaram-pefy izany hoe mamofompofona famotsiam-bola sy fanohanana amin’ ny fampihorohoroana ny vola ampiasaina dia miditra an-tsehatra izy ireo. Nahintsy raha teo ny fanazavana izay nentin’ ny talen’ny SAMIFIN , fa na fifidianana io na tsy fifidianana dia misy ny lalàna izay efa mipetraka ka tokony harahina. Noho izany dia nampitandrina ireo kandida izay mety manana famatsiana mamofompofona famotsiam-bola ny talen’ ny SAMIFIN.
Noho izany dia nanambara ny talen’ ny SAMIFIN fa tokony niara-dalana amin’ ny lalàn’ny fifidianana ny ady atao amin’ ny famotsiam-bola, satria hoy izy raha toa ka tiana ho lavorary ny ady atao amin’ ny famatsiam-bola mampihaihay na ihany koa ahafahana manatanteraka fifidianana madio dia tokony nifampiankina ireo lalàna ireo. Anisan’ny olana izay noresahin’ ny talen’ ny SAMIFIN ihany koa moa ny momba ny tokony hanokafan’ ireo antoko politika kaonty amin’ ny banky ahafahana manara-maso ny vola ampiasain’ ireo kandida, indrisy anefa hoy ity tompon’andraikitra amin’ ny ady atao amin’ ny famotsiam-bola ity fa dia mamela malakaka ireo kandida ny lalàna mifehy ny fifidianana. Nefa raha noteren’ ny lalàna ireo antoko politika ireo hoy ny talen’ ny SAMIFIN dia mora ny fanarahana maso, satria raha mihoatra ny 10 tapitrisa Ariary ny vola miditra amin’ ny banky dia ho fantatra avy hatrany izany ary ho mora ny fanaraha-maso . Tsiahivina rahateo moa fa mbola mihantona eny anivon’ ny antenimieram-pirenena ny lalàna mikasika ny ady atao amin’ ny famotsiam-bola.
Miezaka manazava ny fomba nandosirany niala teto Madagasikara ilay teratany vahiny nikotrika fanonganam-panjakana antsoina hoe Houcine Arfa. Miampanga ny ministry ny Fitsarana sy ny lehiben’ny Fampanoavana ho nandray vola mitentina 70.000 euros sy 30.000 euros ...Tohiny